Cali Dheere oo dhaawac culus ka soo gaaray weerar
Wararka aynu ka heleyno Gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in horjooge Cali Maxamuud Raage Cali Dheere uu ku dhaawacmay howlgal dhawaan ka dhacay deegaanka Shaam oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolkaasi.
Howlgalka oo dhacay 11-kii bishan kana dhacay deegaanka Shaam oo dhaca inta u dhaxeysa Bariire iyo Awdhiigle ayaa ka dambeeyay ka dib markii ay Ciidanka Xoogga Dalka ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen aagaasi oo xilligaasi maleeshiyaad uu la socday horjooge Cali Dheere ku socdaalayay.
Weerarka ayaa sidoo kale, waxaa al-Shabaab lagaga dilay 17-maleeshiyo halka 25-kale oo uu ku jiro afhayeenkooda dhaawac culus lagu gaarsiiyay, waxaana hadda dhaawaca Cali Dheere lagu hayaa deegaanka Kuntuwaareey ee gobolka Shabeelaha Hoose, sida ay saaraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka u xaqiijiyeen warbaahinta.
Ciidamada Xoogga Dalka ayaa dhawaan maleeshiyadda al-Shabaab ka saaray degmada Awdheegle oo muddo ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah, waxaana hadda degmadaasi dib ugu soo noqday dadkii horay uga barakacay handadaada al-Shabaab nolol cusubna bilaabay.
Howl-gallada ka dhan ah Shabaab oo si xooggan u socdaan
Ciidamada Xoogga dalka ayaa wada howlgallo maleeshiyada argaggixisada al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada ayaa argaggixisada ilaa haatan kala wareegay meelo badan oo ay dadka ku dhibaateyn jireen iyagoona sidoo kale dilay maleeshiyaad badan halka kuwo kala dhaawaceen.
General Yuusuf Raage Odawaa Taliyaha Ciidanka Lugta ee Xoogga Dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ciidanku howlgalkooda ka dhan ah kooxda al-Shabaab sii socon doono tan iyo inta laga sifeynayo maleeshiyaadka al-Shabaab.
“Waxaan tageynaa insha Allah meelo badan oo kooxda al-Shabaab ku sugan yihiin, waxayna ciidamada qalabka sida diyaar u yihiin in ay kooxda ka sifeeyaan deegaannada ay kaga sugan yihiin gobolka Sh/Hoose, waxaana jira qorshe ballaaran oo ka dhan ah al-Shabaab” ayuu yiri taliye Odawaa.
Al-Shabaab oo door-biday isticmaalka haweenka ee is-miidaaminta
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu sare u qaaday isticmaalka haweenka ee weerarrada ismiidaaminta. Bishii lasoo dhaafay keliya, ururka nabad-diidka ah wuxuu labo weerar oo is-miidaamin ah ku qaaday magaalada Muqdisho iyadoo labadaas weerar ay fuliyeen labo haween oo argagixisada al-Shabaab ay soo direen.
Mid ka mid ah weerarradaas waxaa lala beegsaday xarunta duqa magaalada Muqisho, halkaasoo ay ku dhinteen siddeed qof oo uu ka mid yahay duqa Muqdisho Cabdiraxamaan Cusmaan. Weerarka kale wuxuu ahaa mid fahilmay oo lala beegsanayay saldhigga ay leeyihiin Ciidammada Xoogga Dalka.
In kastoo ururka dilaaga ah uu ku faanay dilka uu u geystay siddeeddaas qof oo shacab u badnaa iyo aragaggaxa uu ku riday ummadda Soomaaliyeed, weerarrada uu u adeegsado haweenka waxay tusinayaan inuu ku jiro xaalad adag iyo inuu door biday inuu qaraxyada uu u isticmaalo dumar.
Markii ugu horreysay ee uu ururka al-Shabaab dumar u adeegsado ismiidaaminta ayaa aheyd isu daygii dilka Cabdishakuur Xasan oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya sanadkii 2011-kii. Xilligaas wixii ka dambeeyay, ururku wuxuu dumar u adeegsaday weerarrada is-miidaaminta labo mar oo kala ahaa 2012-kii 2015-kii weerarradaas oo ay ku dhinteen 36 qof.
Sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimaha argaggixisada iyo amniga, haddii uu urur argaggixiso dumar u adeegsado weerarrada noocaan ah, waxay muujinaysaa inuu ku jiro xaalad adag iyo in u isticmaalka dumarka weerarrada ay tahay door-bid quus ah.
Sababta guud ee uu ururka u adeegsanayo dumarka weerarrada is-miidaaminta ayaa la sheegay inay u sahlan tahay in qof dumar ah ay u suurta-gasho inuu fuliyo qarax, halka raga inta badan aad loo baaro marka ay marayaan goobaha amniga iyo isbaarooyinka.